Fanomezan'Andriamanitra ny vady – FJKM Ambavahadimitafo Fanomezan'Andriamanitra ny vady |
Fanomezan'Andriamanitra ny vady
Publié le 10 novembre 2008 à 12:11
Fanomezan’Andriamanitra ny vady, hanaovako vady sahaza ho azy izy (GENESISY 2,18)
Ny Tenin’Andriamanitra dia milaza fa : Fanomezan’Andriamanitra ny vady.
Amin’io andininy io (Gen.2,18) dia hitantsika fa Andriamanitra mihitsy no nandray andraikitra hanome vady an’i Adama. Tsy Adama akory no nanantona an’Andriamanitra ka nangataka vady taminy, tsy izy no nangataka mba homena namana. Fa Andriamanitra tamin’ny fahendreny sy ny fitiavany no nanapa-kevitra hanome vady azy. Ary izany no hilazana hoe : Fanomezan’Andriamanitra ny vady, izany hoe : sitrapon’Andriamanitra ny hanambadian’ny olona ka hanorenany tokantrano.
Fampieritreretana : Raha fanomezana ny vady, inona no tokony ho ataoko voalohany indrindra raha vao mahazo vady ? – Ary raha Andriamanitra no nanome azy, iza ary no tokony hanaovako izany ?
Tsy tsara raha irery rahalehilahy (GENESISY 2,18). Tenin’Andriamanitra izany.
Ary mahasambatra ny fo ny mahafantatra sy mahatsapa avy amin’io teny io fa mihevitra izay mahatsara antsika Andriamanitra. Ny tokantrano izay naoriny dia nataony hitondra antsika amin’ny fahasambarana.
Ny vady izay omeny anao dia vady hahatsara ny fiainanao. Ambaran’ny mpandinika fa ny lehilahy dia mitondra toky sy fiarovana ho an’ny vehivavy. Ny vehivavy iray sakambinin’ny vadiny amin’ilay sandriny matanjaka iny, dia mahatsapa fahatoniana mahafaly.
Ny vehivavy kosa dia mitondra famelombelomana sy risi-po ho an’ny lehilahy. Ilay rangahy sasa-dahasa sy sorena tany am-pitadiavana tany, rehefa mahare ny feo malefaky ny vavy sy mahita ny tsikitsikiny, nony mody ao an-trano dia mahatsiaro velombelona indray.
Eny, tsara ny vady nomen’ny Tompo ! Saingy raha tsy tiantsika ny mpanome dia ratsy hatrany ny fanomezany.
Fampieritreretana : Ny tokony hodinihiko mba hahitako ny fahatsaran’ny vadiko dia ity : Tiako ve Andriamanitra ?
Nalaina avy amin’ny “Ny Tsiambaratelon’ny Tokantrano sambatra